QM “Eritrea Wax hub ah ma geyn Magaalada Baydhabo” – SBC
QM “Eritrea Wax hub ah ma geyn Magaalada Baydhabo”
War ka soo baxay Qaramada Midoobay qeybteeda qaabilsan La socoshada xaaladaha Soo kordha ayaa lagu shegay in aysan jirin wax hub ah oo ay dowlada Eritreau dirtay Soomaaliya gaar ahaan Magaalada Baydhabo taasi oo ay dhawaan ku eedeysay Dowlada Kenya.
Hadalka Qaramada Midoobay ayaa Qaboojinaya xiisad labada Dowladood ee Eriteria iyo Kenya ka dhextaagneyd ka dib markii dowlada Kenya ay dhawaan shaacisay in diyaarado Dagaal ay leedahay Eriteria ay hub iyo saanad geysay magaalada Baydhabo.
Dowlada Eritrea ayaa horey ugu celcelisay inaysan wax faragelin ah ku hayn arimaha soomaaliya gaar ahaan taagero ay siiso Xarakada alshabaab ee ka dagaalanta Dalka Soomaaliya
Dowlada Kenya ayaa horey u sheegtay inay hayso xog iyo warbixino rasmi ah oo muujinaya in diyaarado Sida saanad Meleteri ay ka dageen garoonka Diyaaradaha ee Baydhabo kuwaasi oo ka yimid Dalka Eriteria.
Ma jirto wax war ah oo weli ka soo baxay DowladaHa Nairobi & Asmara oo ku aadan warka ka soo baxay QM ee la xiriira inaysan Wax hub ah Soomaaliye geyn Eriteria.
Tan iyo intii ay biloowdeen Xiisadaha Dagaal ee ka dhextaagan Xarakada Alshabaab iyo Dowlada Kenya waxaa soo baxayay eedeymaha labada dhinac ay isku jeedinayeen taasi oo ay ku jirto in Kenya ay sheegtay in Alshabaab ay taageero ka helayso Eriteria.
been kastaa marbeey cadaataa!